ဆက်လက်လေ့လာရန်စိတ်လှုံ့ဆော်မှု ၂၅ ခု | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ဆက်လေ့လာရန်စိတ်ခွန်အားနိုးစေသောစကားစု ၂၅ ခု
ဆက်လက်လေ့လာရန်ဤလှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာစကားစု ၂၅ ခုကိုမကြည့်မီသင့်ကိုကြည့်ရှုရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည် ဒီဗီဒီယိုခေါင်းစဉ် «အကောင်းဆုံးလေ့လာမှုနည်းပညာ».
ဗီဒီယိုတွင်ပါ ၀ င်သူမှာစိတ်ပညာဘွဲ့ရှိပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာပြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးသောဆရာဝန် Dr. Alberto Sanagustínဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်၊ ဒီမှာမင်းတို့ပြောနေတာကမင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်
သူသည်ဆေးပညာနှင့်စိတ်ပညာနှစ်ခုလုံး၏ကျောင်းသားဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးတွင်လေ့လာမှုနည်းစနစ်အနည်းငယ်ကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီးမည်သည့်အရာသည်မှန်ကန်ကြောင်းကိုပြောခဲ့သည်။
စာမေးပွဲအချိန်ပြည့်ရောက်ပြီ၊ ကြိုးစားလေ့လာရန်စိတ်လှုံ့ဆော်မှု ၂၅ ချက်။။ ကျောင်းသားများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောစာပိုဒ်တိုများ -
မင်းကိုသားရဲလိုအသက်ရှင်ဖို့မပြုစုခဲ့ဘူး၊ Dante Alighieri
«ယဉ်ကျေးမှုကိုစာအုပ်များဖတ်ခြင်းဖြင့်ရရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ပိုပြီးလိုအပ်တဲ့ကမ္ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာကိုအမျိုးသားတွေဖတ်ပြီး၊ သူတို့ထဲကတည်ရှိပြီးသားအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်သာရရှိနိုင်ပါသည်။ " Lord Chesterfield ။
လေ့လာမှုကိုတာ ၀ န် ၀ တ္တရားအဖြစ်ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားပါ။ အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
"ငါ့ကိုပြောပြပါငါမေ့, သင်ပေးငါမှတ်မိ, ငါ့ကိုပါဝငျနှင့်ငါလေ့လာသင်ယူ။ " Benjamin Franklin
ပညာရှိတို့သည်ပညာကိုရှာ။ ၊ အရူးတွေကသူတို့ရှာတွေ့ပြီလို့ထင်ကြတယ် နပိုလီယံ Bonaparte ။
“ ဆရာ၊ ဆရာမတွေနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးသင်ယူခဲ့တယ်။ ငါ၏အလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူပိုမို; ငါ၏အကျောင်းသားများနှင့်အတူပို။ ပင်။ » ဟိန္ဒူစကားပုံ။
"ခွေးအပြင်ဘက်မှာစာအုပ်ကလူသားရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်နိုင်ပြီးခွေးထဲမှာလည်းဖတ်ဖို့သိပ်မှောင်လွန်းနေလိမ့်မယ်။ " Groucho မာ့က်စ်။
"သင်ယူခြင်းသည်လက်ရှိဆန့်ကျင်ရေးလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆင်တူသည်။ သင်ရပ်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်ပြန်သွားနိုင်သည်။ " အက်ဒွပ်ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Britten ။
“ ရုပ်မြင်သံကြားကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကဖွင့်တိုင်းငါနောက်အခန်းတစ်ခန်းကိုသွားပြီးစာအုပ်ဖတ်တယ်။ " Groucho မာ့က်စ်။
«သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပြောကြတယ်။ ငါမေ့သွားတယ်။ ငါမြင်။ နားလည်၏။ ငါလုပ်ခဲ့တယ်ငါသင်ယူခဲ့တယ်။ " ကွန်ဖြူးရှပ်။
"ဥာဏ်ပညာသည်ဗဟုသုတတွင်သာမကအသိပညာကိုလက်တွေ့တွင်အသုံးချနိုင်စွမ်းပါ ၀ င်သည်။ " အရစ္စတိုတယ်
“ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုမရှိဘဲသင်ယူခြင်းသည်စွမ်းအင်ကိုဖြုန်းတီးစေသည်” ကွန်ဖြူးရှပ်။
"အလုပ်တွေအများကြီးနဲ့ရရှိတာကပိုချစ်တာပဲ။ " အရစ္စတိုတယ်
"ကျွန်မရဲ့ကျောင်းသားတွေကိုသင်ပေးတာမဟုတ်ဘဲသူတို့သင်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုသာပေးပါတယ်။ " အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
'' သင်ယူခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုရိုးရှင်းသောနောက်ဆက်တွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့နေတဲ့နေရာမှာငါတို့သင်ယူမှုလည်းရှိတယ်။ " ဝီလျံရှိတ်စပီးယား။
ငါသိတဲ့လူတိုင်းဟာတစ်နည်းနည်းနဲ့ငါ့ထက်သာတယ်။ အဲ့ဒီသဘောနဲ့သူ့ကိုငါသင်ခန်းစာယူလိုက်တယ်။ " ဖ်ဝေါ်လ်ဒိုအီမာဆန်။
"မိုက်မဲမှုရဲ့အမြင့်ဟာနောက်ပိုင်းမှာဘာကိုမေ့မေ့သွားမယ်ဆိုတာကိုလေ့လာနေတာပါ။ " Rotterdam ၏ Erasmus ။
"သင်လေ့လာချင်လျှင်သင်ပေးပါ။ " စင်ကာပူ။
"ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့အရာအနည်းငယ်ကငါလျစ်လျူရှုထားတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တန်ဖိုးမရှိတာ၊ Rene ဒေးကား။
ဤစကားစု ၂၅ ခုကသင့်အားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ချထားပါကဤဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ ခက်ခဲလေ့လာရန်လှုံ့ဆော်မှု။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု » ပညာရေး » ဆက်လေ့လာရန်စိတ်ခွန်အားနိုးစေသောစကားစု ၂၅ ခု
Francisco သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဟုသူကပြောသည်
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ကငါတို့လိုအပ်နေချိန်မှာအားနည်းချက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမလွဲမရှောင်သာဖတ်သင့်တဲ့ချိန်းဆိုချက်တွေဖြစ်တယ်။ လေ့လာမှုကကျွန်ုပ်တို့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာစွန့်ပစ်မထားသင့်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။
Francisco Dental ကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်ပါ
နေထိုင်ရန်အတွက်အကြောင်းပြချက်အသစ်များ။ Rosario Herrera
is လိရှဲ ဟုသူကပြောသည်
ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှုမက်ဆေ့ခ်ျကိုမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီနေ့သူတို့ကိုငါတို့အရင်ကထက်ပိုလိုလာပြီ။ ဆက်လေ့လာရန်
Paola Alvarez Chuquihuanga ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မိဘတွေနဲ့ဝေးရာ ... ငါဘာမှမခံစားရဘူး ... ငါအထက်တန်းကျောင်းတက်နေတယ်။ စိတ်ဓာတ်မကျဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ။
Paola Alvarez Chuquihuanga အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါအိုအိုလာ၊ အားကစားလုပ်ဖို့အကြံပေးချင်တယ်၊ အသုံးဝင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုး၊ အကယ်၍ အားကစားတစ်ခုဖြစ်ပါကအခြားသူနှင့်သင်အတူတကွလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အိပ်ချိန်ကိုလေးစားပြီးကောင်းမွန်စွာစားပါ။
နောက်လိုက်ပါ သင်ဒီနေ့ဝေးနေရတဲ့အကြောင်းရင်းရဲ့အကျိုးဆက်တွေပဲ။ သူတို့သည်သင့်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသင်ထွက်ခွာသွားပါကသင့်အားသူတို့လွတ်သွားသောအရာအတွက်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုဖြစ်လိမ့်မည်။
Hello Paolo ဘုရားသခင်သည်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။
ကျွန်ုပ်တို့တစ်စုံတစ်ရာရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းသာရှိနေသည်ဟုခံစားရသည့်တစ်စုံတစ်ရာသောအချိန်ကိုသင်သိပါသလားသို့သော်ဤမျှမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှအလွန်အံ့ F ဖွယ်ကောင်းပြီးစွမ်းအားအရှိဆုံးဖြစ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ သူသည်မည်သည့်အခါမျှအမေရိကန်ကိုချန်လှပ်ထားခြင်းမရှိဘဲအမေရိကန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝအသက်တာ၏နေ့ရက်တိုင်းကိုသင်နားမလည်နိုင်ပါ။ သင်၏ဘုရားသခင်အားယုံကြည်ကိုးစားရန်အချိန်ကိုသာဘုရားသခင်အားယုံကြည်ကိုးစားပါ။
Jonathan Nieva အားပြန်ပြောပါ
ငါ ......... ဤစာပိုဒ်တိုများ
Motivational စာပိုဒ်တိုများ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်အနည်းငယ်သာ ၀ င်ငွေရရှိခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ကလေးများ၏ကျန်းမာရေးအာမခံနှင့်အခြားအရာများအတွက်လုံခြုံမှုရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။
Motivational Phrases ကိုတုံ့ပြန်ပါ
ယခုသင်ဆက်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤပြproblemနာကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်အဖြစ်ယူပါ။ အချိန်ဇယားဆွဲပါ၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းကိုဖန်တီးပါ။ သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုထားရန်တစ်ရက်လျှင်အနည်းဆုံးကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုသို့သွားပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သနားခြင်း၊ စိတ်မကောင်းဖြစ်ခြင်းတို့သည်သင့်ကိုမကူညီနိုင်ပါ။
Mariana က de Jesus Cruz ဟုသူကပြောသည်
Mariana de Jesús Cruz အားပြန်ပြောပါ
အလွန်ကောင်းသောစာပိုဒ်တိုများ! ကိုယ့်ကိုကိုယ်လှုံ့ဆော်ရန်ကောင်းသောကောင်းသောစာပိုဒ်တိုများနှင့်တူသည်! ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၌ထိုခက်ခဲသောအချိန်များရှိသော်လည်းထိုအချိန်ကာလများကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ဖြတ်သန်းရကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အနက်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
Yesenia အဓိကရုဏ်း ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်လေးနက်သည်ဟုထင်ရသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ငါရယ်မောနေလို့သူတို့ပြောတယ် တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံး၊ မိန်းကလေးများလုပ်သောအရာ ဒါကိုလုပ်ချင်ပေမယ့်ဘဝကပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမပြချင်ဘူး အနည်းငယ်ထုတ်လွှင့်ဖို့မပါ။ ဒါပေမယ့်ပြtheနာကငါမှာတကယ့်တစ်ခုမရှိဘူး။ သူငယ်ချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလမ်းပြနိုင်အောင်လုပ်ဖို့ငါပြုံးလိုက်တယ်။ အရာအားလုံး။ ဒီဟာငါ့အတွက်ပျောက်သွားတယ် ဒါကြောင့်ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးအဲဒါကိုရှာပါသို့မဟုတ်ရောက်လာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်ပါ။
Yesenia Rios သို့ပြန်သွားပါ
Kevin Alfred BURGOS MITE ဟုသူကပြောသည်
KEVIN Alfred BURGOS MITE သို့ပြန်ပြောပါ
Norberto Enrique Vanegas ဟုသူကပြောသည်
မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ အတူတကွပေါင်းသင်းခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်သူများကအကောင်းဆုံးခံစားချက်ရှိကြောင်းဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုအားကောင်းလာကြောင်း၊ အမြဲတမ်းလိုက်ပါလာရန်ကြိုးစားခြင်း၊ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်အားကစားလည်းပါဝင်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Norberto Enrique Vanegas အားပြန်ပြောပါ
Rosario Herrera ဟုသူကပြောသည်
Rosario Herrera ကိုပြန်ပြောပါ
မိ to ဟာယဖွဲ့ခြင်းနှင့်အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အချိန်တိုင်းမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းစကားပုံ ၁၇
Shireb O. Panzardi ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!! အလွန်ကောင်းသောစာပိုဒ်တိုများ၊ သူတို့သည်ကျောင်းသစ်သို့တက်ပြီးစိန်ခေါ်မှုအသစ်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောကျွန်ုပ်၏သားကိုလှုံ့ဆော်ရန်ကျွန်ုပ်အားကူညီသည်
Shireb O. Panzardi အားပြန်ကြားပါ
saul hernandez မှစာပြန်ရန်
ငါလေ့လာဖို့အိမ်ကနေထွက်သွားပြီ၊ ငါ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့ချစ်မြတ်နိုးရသူတွေကိုဝေးဝေးနေဖို့ဘ ၀ သစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ခဲယဉ်းနေပြီ။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအထက်တန်းကျောင်း၏ဒုတိယနှစ်တွင်မရပ်မနားလေ့လာခြင်းကိုတစ်နှစ်လုံးကုန်ဆုံးခဲ့ပြီးနေ့လည်ခင်းတစ်ခုလုံးကိုမကျော်လွှားနိုင်ဘဲနေခဲ့ရသည်၊ သို့သော်ယခုတွင်ငါသည်ငါ့အခန်းတစ်ဝက်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသော့ခတ်။ မရပါ။ လေ့လာရန်နာရီ ငါစာမေးပွဲနီးကပ်လာသည်နှင့်ဘာသာရပ်များအတွက်လေ့လာသင်ယူရန်ရှိသည်, ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ ငါအရမ်းကူညီလာပြီဆိုရင်သင်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲဒါကငါ့အတွက်အရမ်းကောင်းလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါဘုရား၊ သငျသညျအပေါ်သယ်ဆောင်ရန်ရှိသည်။ မင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုမျိုးစေ့ကြဲတယ်။ သင်အာရုံစိုက်သင့်ကြောင်း ထမှေးမှိန်ခြင်းသည်ဘဝတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝပုံစံရှိရန်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံရန်လိုအပ်သည်။ မင်းရဲ့မိဘနဲ့မိသားစုကမင်းကိုဂုဏ်ယူတယ် ဘုရားသခင်ကိုရှာသောသူအပေါင်းတို့၌ကျေးဇူးရှိတော်မူ၏။ ခွန်အားနှင့်ခွန်အားကိုတောင်းကြလော့။ နေ့စဉ်ထ။ အိပ်သောအခါ၊ အိပ်သောအခါ၊ ထိုအရာကိုသင်၏စိတ်နှလုံးအထဲ၌သွင်းထားလော့။ ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။
Jose Manuel Lagunes နင်္ဂနွေနေ့ ဟုသူကပြောသည်
jose manuel lagunes domingo အားပြန်ပြောပါ
ပါရမီရှင် araceli hurtado ဟုသူကပြောသည်
araceli hurtado regalado အားပြန်ကြားပါ
ကျွန်ုပ်သည်လူငယ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးယနေ့လေ့လာမှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်ဆိုပါက
ကျောင်းသားများကိုသူတို့၏နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်လှုံ့ဆော်ရန်စာဖတ်ခြင်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားပါသည်
အထက်တန်းကျောင်းသားများအားစာဖတ်ရန်အလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်
သင့်ကိုကျွန်ုပ်နှင့်အခြားများစွာအထောက်အပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင့်ကိုမသိသော်လည်းသင်၏ကျွမ်းကျင်မှုအားလုံးကိုသင့်ကိုမသိဘဲလေ့လာခြင်း၊ လေ့လာခြင်းမပြုဘဲသင်လုပ်လိုသောအရာအားလုံးတွင်တွေ့လိုသည်။ မင်းငါ့ကိုစကားမပြောခဲ့ဘူး
မင်းရဲ့မိသားစုကကြွယ်ဝတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ မင်းရဲ့အသိပညာကအရာအားလုံးထက်ပိုတန်ဖိုးရှိတယ်။
JEISON Adan ဟုသူကပြောသည်
JEISON ADAN မှစာပြန်ပါ
စကားစုအားလုံးထဲက ၅ ယောက်ကပဲငါ့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်